छोराको पढाइ खर्च उठाउन दाइजो !- विचार - कान्तिपुर समाचार
छोराको पढाइ खर्च उठाउन दाइजो !
छोराको पढाइ खर्च छोरीका बाबुबाट उठाउनुपर्छ भने त्यत्ति नै खर्च गरेर पढाएकी छोरीको मूल्य के ?
माघ १३, २०७५ लीला लुइँटेल
काठमाडौँ — एक जना छिमेकीकी डाक्टर छोरीका लागि तय गरिएको वरको मूल्य साठी लाख रुपैयाँ भन्ने सुनेपछि र जिन्सी सामानको लिस्ट देखेपछि मैले ‘यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु ?’ भनेर सोधेँ । केटाका बाबुले ‘अझ हामीले निकै कम भनिरहेका छौं, हाम्रा छोरालाई डाक्टर बनाउन त्यतिले पुगेको छैन’ भनेको सुन्दा म आश्चर्यचकित भएँ ।
‘हाम्री छोरी पनि डाक्टर हुन्, उनलाई पढाउन पनि त्यत्तिकै खर्च लागेको तपाईंहरूलाई थाहै होला अनि त्यसको मूल्य नि ?’ भनेर मैले जिज्ञासा राखेँ । केटाका बाबु क्रुद्ध भएर ‘यो पहाडी लोग हाम्रो परम्परामा किन बढ्ता हुन आएको’ भने । केटीका बाबुले मतिर पुलुक्क हेरे । त्यहाँ बस्न उचित नलागेर म जुरुक्क उठेर हिँडेँ ।
अहिले पुगिसरी हुने अभिभावकले आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यले भेटेसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा छोरा र छोरी भनी विभेद गरेको प्राय: भेटिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश नेपाली अभिभावकका लागि छोराको भन्दा छोरीको विवाह आतङ्ककै रूपमा रहेको पाइन्छ । यस्तो आतङ्कले सिर्जना गरेको त्रासदी पहाडमा भन्दा बढी मधेसमा देखा परेको छ । मधेसमा छोरी बढ्दै जाँदा अभिभावकमा आतङ्कको पारो चढ्दै जान्छ ।
यसखाले क्रियाकलापलाई कुनै परिवारको आन्तरिक मामला भनेर पन्छिने स्थिति छैन । तिलक र दाइजो आतङ्क नभोगेको मधेसी परिवार पाउन हम्मे पर्छ । दाइजो एवं तिलक आतङ्ककै कारण कतिपय चेलीले आत्महत्या गरेका पनि छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको तथा धेरै दिदीबहिनी भएको परिवार बढी पीडित छ । आमाबाबु घरजग्गा बेचेर वा ऋण गरेरै भए पनि लोभी एवं द्रव्यपिशाच वरपक्षका माग पूरा गर्न बाध्य छन् । मधेसका छोरीलाई बालविवाह गरिदिने तथा उच्चशिक्षाबाट वञ्चित गरिने कटु यथार्थ हामीले देखेभोगेकै हो । वर पक्षबाट तिलक एवं दाइजो माग्नु कानुनी रूपमा अवैध भनिए पनि सामाजिक अभ्यासमा यो घटेको छैन । उल्टै यसले विकराल रूप लिँदै छ ।
मधेसमा छोरीको विवाह गर्ने सबै कुरा मिलेपछि तिलक एवं दाइजो विवाद र छलफल विषय बन्ने गरेको छ । त्यो पनि छोरीका बाबुको स्वेच्छा हुँदैन । छोराका तर्फबाट व्यापारिक तरिकाले तय गरिन्छ । तिलक एवं दाइजोको परिमाणमा केटाको कुलघरान तथा शिक्षाले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । अहिलेको व्यावहारिक अभ्यासअनुसार डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल तथा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी वरका लागि ठूलै मोलमोलाइ हुन्छ । वरपक्षको मागअनुरूप दाइजो ल्याउन नसके गृहलक्ष्मी मानेर आफैँले भित्र्याएकी बुहारीलाई यातना दिने, घरनिकाला गर्नेजस्ता घटना बारम्बार घटिरहेका छन् ।
मधेसमा शिक्षित, बौद्धिक एवं चेतनशील वर्ग नभएको होइन । यस्ता व्यक्तिहरूले पनि तिलक एवं दाइजो प्रथाविरुद्ध सामाजिक जागरणका लागि भूमिका खेल्न सकेका छैनन् या उनीहरू यसबारे टीकाटिप्पणी गर्न चाहँदैनन् । सबभन्दा हास्यास्पद एवं लज्जास्पद त छोराको पढाइ खर्च छोरीका बाबुबाट उठाउनुपर्ने दरिद्र मानसिकता छ । छोरी चाहे डाक्टर, इन्जिनियर तथा कामकाजी नै किन नहुन्, दाइजो नदिई तिनीहरूको पनि विवाह हुँदैन ।
यही दाइजो एवं तिलक प्रथाका कारण अधिकांश परिवारमा भू्रणको लिङ्ग पहिचान गरेर छोरी भए भ्रूण नष्ट गरिदिनेजस्ता मानवताविरोधी कार्य धेरै क्षेत्रमा महामारीकै रूपमा फैलिसकेको छ । यसखाले जघन्य अपराधले जनसंख्याको सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यस्तो विकराल अवस्थाविरुद्ध सीमित मानव अधिकारीवादी, महिलावादी व्यक्ति एवं संघसंस्थाले बेलाबखत आवाज उठाएजस्तो देखिए पनि यसखाले दुष्कर्म उन्मूलनतर्फ कसैले सक्रियता देखाएको पाइँदैन ।
अहिले राजनीतिक रूपले मधेसमा परिवर्तन आएको र मधेसका जनता आफ्नो अधिकारका लागि सचेत भएको सुनिन्छ तर चेलीबेटीका नाममा गरिने यसखाले अमानवीय क्रूर क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नेतर्फ व्यक्ति, समाज एवं राज्यको ध्यान प्रभावकारी पाइँदैन । अझ मधेसी जनताको अधिकारको सुरक्षाका लागि समाज सेवा गरेको, राजनीति गरेको हवाला दिनेहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । कि जनसंख्याको आधा हिस्सा मधेसी चेलिबेटीचाहिँ उनीहरूका दृष्टिमा जनता होइनन् ?
मानवीय मूल्यकै उपहास गर्ने यस्ता क्रियाकलाप शिक्षित तथा सभ्य कहलिएकाहरूको समाजमा परम्परा एवं संस्कारका नाममा जरो गाडेर बसिरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलाप न्यून गराउँदै मधेसका चेलीबेटी एवं तिनका अभिभावकलाई सिंगो मानवका रूपमा जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ यस क्षेत्रका परिवार, समाज तथा प्रशासन कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
उच्च शिक्षित विवाहयोग्य कतिपय युवकलाई यसबारे जिज्ञासा राख्दा सामाजिक तथा पारम्परिक संस्कार भनेर तिनको संरक्षणमा जोड दिने मानसिकता लाजै पचाएर मसँग उनीहरूले अभिव्यक्त गरेका छन् । मानवीय मूल्यकै उपहास गर्ने यस्ता क्रियाकलापलाई अझै परम्परा भनिरहने कि सामाजिक क्यान्सर मानेर तिनको उपचार खोज्ने ?
यहाँ प्रश्न उठ्छ, छोराको पढाइखर्च छोरीका बाबुबाट उठाउनुपर्छ भने त्यत्ति नै खर्च गरेर पढाएकी छोरीको मूल्य के ? के छोरी पाएर उचित शिक्षादीक्षा दिई उसलाई योग्य बनाउनु नै छोरीका बाबुको सबभन्दा ठूलो अपराध हो ? अनि तिलकका नाममा देशको शिक्षित एवं एउटा सुयोग्य नागरिकको मोलमोलाइ बोकोसरह गर्ने र यसको कमी हँुदा आफ्नी गृहलक्ष्मीलाई जिउँदै जलाउनेहरूमा आफूलाई एक्काइसौँ शताब्दीको मानव भन्न भनाउन लज्जा हुनुपर्ने होइन र ? प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०८:२२
बुहारी मेसिन, ज्वाइँ नारान !
पारिवारिक शान्ति एवं समृद्धिको अपेक्षा गर्ने हो भने बुहारीलाई जिउँदोजाग्दो संवेदनाहीन मेसिन र आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण आफन्तको समेत दासीका रूपमा हेर्न छाड्नैपर्छ।
पुस २३, २०७५ लीला लुइँटेल
काठमाडौँ — हाम्रा ऋषिमुनि एवं पूर्वजद्वारा साधना, तपस्या र योगबलका आधारमा तयार पारिएका जीवनोपयोगी वैदिक दर्शन एवं अनेक विशिष्ट ग्रन्थ हामी पूर्वीयका लागि मात्रै नभएर यस धर्तीका सम्पूर्ण मानव जातिकै लागि अति आवश्यक र अपरिहार्य रहेछन् भन्ने समयक्रममा स्पष्ट हुँदै आएको छ।
पश्चिमाले गरेको भौतिक विकासको आधार पनि पूर्वीय मूल्य र वाङ्मय नै हुन् भनी पश्चिमका अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिकले प्रशंसा गरेका छन्।
पूर्वीय संस्कार एवं जीवनशैली शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशिष्ट हुनाका साथै जीवनलाई सहज बनाउन उपयोगी छन्। यस्तो उच्चतम संस्कार एवं जीवनशैलीमा अभ्यस्त भइसकेका हामीले समयको कुनै क्षणमा आइपुग्दा मानवीयताका दृष्टिले ठूलै कलङ्क पनि सिर्जना गरेका छौं। यसरी हामीले सिर्जना गरेको कलङ्कगत सन्दर्भ बुहारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र दैनिक जीवनमा गरिने व्यवहार हो।
आफ्ना जन्मदातालगायतका सम्पूर्ण सन्दर्भ त्यागेर अर्काका आमाबाबुलाई नै आफ्नै मानी आएकी बुहारीलाई हाम्रो दरिद्री मानसिकताले कहिल्यै सम्मान गर्न जानेन। अझ भनौं बुहारीलाई मान्छेका रूपमा देख्नुको साटो जिउँदोजाग्दो तर संवेदनाहीन मेसिनका रूपमा मात्र हेर्न र व्यवहार गर्न खोज्यो। यो हाम्रो सभ्यतामा देखापरेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
आफ्नो सर्वस्व त्यागेर हामीलाई नै सर्वस्व ठानी आएकी अनि हाम्रो वंश परम्परालाई निरन्तरता दिने, जीवनभर हाम्रो सेवामा संलग्न हुन तयार भएर आएकी बुहारीलाई ‘जैरी’ ठानेर भएभरका शोषण एवं अत्याचार ऊप्रति खन्याउन खोज्नु हाम्रो सामाजिक इतिहासकै सबभन्दा ठूलो कलङ्क हो।
अर्कोतिर गाह्रोसाह्रोमा एक कप पानी पनि तताएर नखुवाउने बुहारी समानको अर्को नाता ज्वाइँलाई चाहिँ ‘नारान’ का रूपमा पूजाअर्चना गर्ने हाम्रो व्यावहारिक अभ्यास पनि अतिवादको पराकाष्ठा हो। कतिपय जातिमा बुहारीलाई सुनको फूल पार्ने कुखुरीका रूपमा लिने प्रचलन पनि छ।
आफ्नै छोराभन्दा बढी सुविधा भोग गरेर योग्यता हासिल गरी छोरासरह नै आर्जन भएकी बुहारीचाहिँ प्रत्येक कुरामा चुस्त–दुरुस्त भएर हाम्रा घरमा प्रवेश गर्नुपर्छ तथा उनीहरूका आफन्तको दासीका रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। अस्तित्व नै नामेट हुने गरी ज्वाइँ पक्षका कुकुर–बिरालासम्मका पैतालामुनि छोरीका आफन्तलाई घुसार्न खोज्नु कुन दृष्टिकोणले उचित हुन्छरुरु अबको परिवर्तित परिवेशमा यसखाले एकाङ्गी एवं अहंवादी अपेक्षा कत्तिको तर्कपूर्ण र न्यायसङ्गत हुन्छ, सोच्न ढिला भइसकेको छ।
बुहारीले पारिवारिक मर्यादाभित्र रहनु पर्दैन, सासू–ससुराको सेवा गर्नु पर्दैन, इष्टमित्रको स्वागत–सत्कार गर्नु पर्दैन, अनि ज्वाइँले सासू–ससुराको स्याहार–सुसार एवं सेवा गरेर बस्नैपर्छ भन्न खोजिएको होइन। यहाँ दैनिक व्यावहारिक जीवनका अनेक सन्दर्भमा समान दृष्टिकोण, समान व्यवहार एवं समान सहभागितातर्फ इङ्गित गर्न खोजिएको हो।
छोराका अभिभावकले आफ्नो सङ्कीर्ण मानसिकता परिवर्तन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ अनि बदलिँदो परिवेशका लागि आफू एवं आफ्नो छोरालाई अभ्यस्त बनाउनु जरुरी भइसकेको छ। पारिवारिक शान्ति एवं समृद्धिको अपेक्षा गर्ने हो भने बुहारीलाई जिउँदोजाग्दो संवेदनाहीन मेसिन तथा आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण आफन्तका समेत दासीका रूपमा हेर्न छाड्नैपर्छ।
कतिपय जातिमा प्रचलित छोराको शिक्षामा लागेको खर्च छोरीका बाबुले बेहोरिदिनुपर्ने तिलकसम्बन्धी लेनदेनमा शिक्षित एवं जागरुक पुस्ताका युवा कहिलेसम्म रमाउने होरुरु
हामी आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाउन चाहन्छाैं भने आफ्नो छोरालाई पनि धार्मिक, पारम्परिक, पारिवारिक, सामाजिक सन्दर्भका विभिन्न क्रियाकलापमा छोरी–बुहारीसरह अनिवार्य समावेश गराउनुपर्छ।
धार्मिक, पारम्परिक, पारिवारिक, सामाजिक आदि क्रियाकलाप एवं संस्कारचाहिँ महिलाको ठेक्का अनि जुवा, मदिरा एवं मनोरञ्जनचाहिँ पुरुषले पाएको प्रकृतिप्रदत्त वरदान ठानिने सङ्कीर्ण सोचबाट प्रत्येक परिवार मुक्त हुनुको विकल्प छैन। यसलाई अहंका रूपमा लिएर कोही अगाडि बढ्छु भन्ने ठान्छ भने परिवार दुर्घटनातर्फ धकेलिने सम्भावना अत्यधिक छ।
अबका महिलाले अपेक्षा गर्ने नै समान सहभागिता र आत्मसम्मानको परिवेश हो। बुहारी तथा पत्नीले जेजस्तो पनि सहनुपर्छ भन्ने सङ्कीर्ण मानसिकताले संसार सहज रूपमा चल्नेवाला छैन। थोरै भए पनि महिला शिक्षित हुनाका साथै क्रमशस् स्वावलम्बी हुँदै गएका छन् भने अर्कोतिर परिवर्तित विश्वका हरेक सन्दर्भ र दृष्टिकोणमा उनीहरूको पहुँच पुगिसकेको छ।
यसले गर्दा पनि उनीहरूको शब्दकोशमा ‘सहनशीलता’ भन्ने शब्दको प्रविष्टि नै भएको छैनरु। अर्कोतर्फ अहिलेको आमा पुस्ताले पनि छोरीहरूलाई कथित सहनशीलताको पाठ सिकाउन सकिरहेका छैनन्, अझ भनौं चाहिरहेका पनि छैनन्।
कुनै महिलाले पतिका आमाबाबुलाई आफ्नै आमाबाबु मानेर सेवा गर्ने भएपछि पतिले पनि आफ्ना आमाबाबुलाई आदर गर्नुको साटो परम्पराकै नाममा आफूलाई देवत्वकरण गरी सासू–ससुराबाट सीमाविहीन मानमर्यादा खोजी अनावश्यक अहं देखाउनुलाई पनि अबका महिलाले सहन सक्नेछैनन् सायद।
अझ सन्तान जन्मिएका बेला आफ्नो पत्नी र सन्तानको स्याहार–सुसारमा सासू, साली एवं ससुराली पक्षका अन्य महिला सदस्यबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई अधिकारकै रूपमा अपेक्षा गर्ने प्रचलन पनि छरु। अप्ठेरो परिस्थितिमा पारिवारिक सहयोग एउटा कुरा होरुतर सम्पूर्ण रूपमा अरूमा निर्भर रहेर पतिले पाउने प्रसूति सेवा बिदाको उपयोगसमेत नगरी आफू ठालु पल्टिएर हिँड्नु कत्तिको जायज र विवेकशील हुन्छ भन्ने सोच्न जरुरी भइसकेको छ।
यसैगरी ‘यो घर मेरो हो, म यसको मालिक हुँ, उसलाई मैले ल्याएको हुँ, त्यसैले ऊ मेरो परिवारको दासी हो’ भन्ने दरिद्री एवं सङ्कीर्ण दृष्टिकोणबाट मुक्त भएर समान सहभागिता एवं पत्नीको आत्मसम्मान जगेर्नातर्फ प्रत्येक पुरुष सावधान हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। पत्नी एवं बुहारीको आत्मसम्मानको सुरक्षा गर्न जाने मात्र पति एवं सासू–ससुराको आत्मसम्मानको जगेर्ना हुने यथार्थ बुझ्न पनि ढिलो भइसकेको छ।
सम्बन्धविच्छेदका घटना वृद्धि हुनुमा उल्लिखित कतिपय सन्दर्भ प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार देखिएका छन्। अधिकांश सम्बन्धविच्छेदका घटनामा आत्मसम्मान गुमाएर पितृसत्तात्मक मानसिकताको चेपमा महिला बस्न नचाहनु नै प्रमुख कारण रहेको हामीले देखेसुनेको एवं भोगेको पनि हो।
सम्बन्धविच्छेदको नकारात्मक असर महिलालाई मात्र पर्छ, पुरुषको त खुट्टा भए जुत्ता कतिकति भन्ने सङ्कीर्ण सोच नेपाली समाजमा बासी भएर कुहिन थालिसकेको छ। सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाप्रति परिवार एवं समाजले राख्ने नकारात्मक दृष्टिकोण क्रमशस् कम हुँदै गएको छ।
सम्बन्धविच्छेदपछि पत्नीलाई कानुनी रूपमा दिनुपर्ने अंश, सन्तानको पालनपोषण एवं शिक्षादीक्षाको व्यवस्थाले पतिको परिवारमा पनि विखण्डन एवं सङ्कटका साथ त्रासदीसमेत प्रवेश गर्ने अवस्था टड्कारो भइसकेको छ।
यस स्थितिमा अब घरपरिवार एवं समाजलाई जोगाउन पुरुषले समान सहभागिता एवं पत्नीको आत्मसम्मानका लागि विवेकपूर्ण ढङ्गले सोच्न ढिला भइसकेको छ। परिवार र समाजलाई कता र कसरी लैजाने भन्ने कुरामा विशेष गरी पुरुषका आफन्त तथा लोग्ने नाम गरेका प्रत्येक पुरुष सचेत हुनु जरुरी भइसकेको छ। यसबाट पति एवं सासू–ससुराले आफ्नो अहंमा ठेस लाग्ला कि भनेर त्रसित हुनु पर्दैन। आफूले पत्नी एवं बुहारीलाई मानवोचित सम्मान गर्नसके आफ्नी छोरीचेलीले पनि अर्को परिवारमा मानवोचित सम्मान पाउन सक्छे।
हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यतायुक्त समाजको विकासक्रममा देखापरेको यो कलङ्कलाई सच्याएर अघि बढ्ने जिम्मेवारी समयले अबको पुस्ताको काँधमा राखिदिएको छ। यसलाई संस्कृतिकै रूपमा व्याख्या गरेर यथास्थितिमै रहिरहन खोज्नु ठूलो भुल हुनेछ। कुनै बेला संस्कृतिकै रूपमा व्याख्या गरिने सतीप्रथा तथा रजस्वला नहुँदै छोरीको कन्यादान गरिदिने व्यवस्थालाई हामीले उन्मूलन गरेका हौं।
संस्कृति कुनै वस्तुलाई परिमार्जन गरेर वा सुसंस्कृत रूप दिएर चम्किलो तुल्याउने काम होरु। कुनै स्थान वा जाति विशेषको संस्कृति अर्को स्थान वा जाति विशेषका लागि अनौठो र अग्राह्य हुन सक्ला तर सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, बलिदान, मानवतावादी भावनाजस्ता विषयवस्तुमा आधारित संस्कृतिचाहिँ सर्वपक्षीय, सर्वजातीय, सर्वराष्ट्रिय, सार्वभौम र सार्वकालिक हुन्छरु। अझ स्पष्ट भन्ने हो भने मानवतावादी आदर्श बोकेको संस्कृति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, दीर्घजीवी, शाश्वत र सत्य हुन्छ।
हाम्रो व्यावहारिक अभ्यासमा देखापरेका यसखाले कलङ्कलाई त्याग्दै अघि बढे मात्र अबको जीवन सहज एवं सुन्दर हुन्छ। परम्परा एवं संस्कृतिका नाममा यस्तै कलङ्कलाई काखी च्यापेर हिँड्ने हो भने व्यक्तिको जीवन एवं पारिवारिक सम्बन्ध तहसनहस हुनेछ।
प्रकाशित : पुस २३, २०७५ १२:२४